Xasan Sheekh oo la kulmay Xildhibaanada iyo Odayaasha Muddulood!! – War La Helaa Talo La Helaa
Xasan Sheekh oo la kulmay Xildhibaanada iyo Odayaasha Muddulood!!
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan qado ah maanta u sameeyey qaar ka mid ah xildhibaanada, wasiirada iyo waxgaradka beelweynta Muddulood ee uu kasoo jeedo.
Qaar ka mid ah xubnaha kulanka ka qeyb-galay ayaa sheegay in kulanka looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin xaaladda dalka, gar ahaan deegaanada beesha Muddulood iyo maqaamka siyaasadeed ee beesha ay ku leedahay dalka.
Dadka kulanka ka qeyb galay ayaa waxaa ka mid ah wasiirka Amniga Maxamed Abukar Islow Ducaale, Wasiir Ku-xigeenka Dekadaha Cusmaan Daallo. Waxaa sidoo kale joogay xildhibaanada labada aqal ee beesha Muddulood.
Waxyaabaha sida garaka ah beesha uga hadashay ayaa waxaa ka mid ah sidii deegaanada beesha looga xoreyn lahaa kooxda Al-Shabaab oo inta badan gacanta ku haysa iyo sidii gobolka Banaadir uu maqam siyaasadeed oo buuxa ugu yeelan lahaa dowladda federaalka.
Kulanka ayaa imanaya ayada oo maalmahan magaalada Muqdisho iyo magaalooyin ay ka mid tahay Nairobi ay ka socdaan waxa dadka qaar ay ugu yeereen “kacdoon siyaasadeed” oo beesha Muddulood ay waddo, xilli aad loogu dhaliilay siyaasiyiinta beesha inay ka seexdeen deegaanadooda.
dhanka kale Kulankaan ayaa imaanayo xili Odayaasha dhaqanka Beelweynta Mudulood iska diiden in la kulmaan Gudoomiyaha Gobalka Banaadir Cabdiraxman Yariisow oo aay dhaliilsan yahiin qaabka ku matalayo Beesha Mudulood.
Maamulka G/Banaadir oo ka hadlay xiliga la soo celinayo dhulalka danta guud Muqdisho!!